Fumanisa ukuba yintoni ii-Icons-Icons | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iimpawu- Iimpawu, i-injini yokukhangela
UJorge Neira | | Iimpawu, Izibonelelo
Mihla le siyabhala miyalezo ngezigidi zamaqonga akhoyo ngoku kwiwebhu. Nokuba siselfowuni, ithebhulethi okanye nangayiphi na imeko, ikhompyuter yethu, siyacacisa umgca womyalezo Eziphethe injongo, umbono okanye isihloko.
Kuhlekisa ukucinga ungakanani umyalezo onokutshintsha ngokuncamathisela i icon. Ubuso obulula okanye into ebonakalisa imvakalelo ethile okanye uphawu lokomfuziselo wesifundo esithile, kwaye ekugqibeleni, kukuba lula oko yenza ezi icon zibe luncedo, ovumela umyalezo ukuba udluliselwe ngokuchanekileyo. Nangona kunjalo, kufuneka sikhumbule ukuba kunokwenzeka ukuba abantu banokutolika ii icon ngendlela yayo, ekufuneka silumkise ngayo ukuba umxholo uya kuba ngumahluko obaluleke kakhulu xa utolika imiyalezo ye icon.
1 Zithini ii icon?
2 Yintoni ii-Icons-Icons?
Zithini ii icon?
Iimpawu emva koko ukuhambelana nokubhala kwihlabathi ledijithali esivumela ukuba sichaze okanye sincamathisele ithoni (ngokuthetha njalo) kumyalezo othile, esivumela ukuba sibonise ngakumbi amandla ethu kumamkeli womyalezo. Kwiminyaka yakutshanje, baye baba ngabaxhasi abagqibeleleyo kwimiyalezo ebhaliweyo, esetyenziswa ngumntu wonke, ukusuka kwelona lincinci ukuya kwelona lidala, nangona kunjalo, siyazi ukuba ukutolikwa kwezi kunokuxhomekeka.
Makhe sijonge umzekelo omfutshane wendlela esinokuthi ngayo jonga iimpembelelo zemifanekiso yonqulo kwimiyalezo ebhaliweyo.
I icon kukubonakaliswa kwesenzo esithile okanye imvakalelo, Wongeza intetho okanye umqondiso kumyalezo. Makhe sicinge okomzuzwana umsebenzi olula kakhulu. Masicinge ukuba sifumene umyalezo obhaliweyo kwaye lo myalezo ulula "Molo" kodwa khawufane ucinge iimeko ezimbini, enye kuzo lo "Molo" ukhatshwa bubuso obonwabileyo kwaye enye apho lo "Molo" eyedwa yedwa.
Kwimeko nganye, umntu unokucinga ukuba kwimeko ka "Molo" ekhatshwa bubuso obonwabileyo ivela kumntu oza neendaba ezimnandi okanye naye onokuthi onwabe; ngeli xesha Umntu othumela u "Molo" eyedwa, angavuya okanye abe lusizi kodwa ngekhe ibekho indlela yokuyithatha, kuba oonobumba kule meko abamele onke amandla omyalezo ngokwawo.
Inqaku lanamhlanje linika iqonga elinonyaka liphethe ukuhlanganisa ii icon ezininzi kangangoko kunokwenzekas, ukulungiselela ukubonelela abasebenzisi ngesixhobo esikhulu Iindidi zeempawu ukukhuphela nokusebenzisa kwifowuni yakho okanye ikhompyuter yakho.
Isiza sijolise ekugcineni umsebenzisi ukukhangela okukruqulayo kwiindawo ezininzi kumnatha, ukuvumela umsebenzisi ukuba angene Iimpawu ezininzi kwiphepha elinye. Kukuhamba phambili okukhulu, kuba njengoko siqonda, ukuqhubela phambili kophando olwenziweyo kwiwebhu ichanekile ngakumbi.
Kwakhona, ii icon zahlulwe ngokwecandelo lazo, kunye neetoni zayo zokubonisa. Umbono ngulo Nika umsebenzisi ukukhangela okuhle malunga nee icon ngokwazo. Ukongeza kuyo yonke le nto, iphepha linenjini yokukhangela iilwimi ezili-14, ukulungiselela indawo enkulu yabemi behlabathi.
Umsebenzisi Unokukhetha nganye yeempawu ofuna ukuzikhuphela, ukwenza ukhuphelo lweefayile ngexesha elithile ngendlela efanayo ezikhethe ngayo.
Ngamafutshane, indawo "Imiqondiso yokuqulatha imiqondiso " yenza ukuba abasebenzisi bakhangele ngobukrelekrele inani elithile leempawu kwiwebhu, ukonga ixesha kunye namandla kutyelelo olungeyomfuneko kwiindawo ezichaphazeleka kusulelo lwentsholongwane okanye kwizithembiso ezingezizo. Okwangoku, iphepha iyaqhubeka nenqanaba lophuhliso, Ukuphuhlisa indlela entsha apho abasebenzisi banokuyila ii icon zabo, bazenzele iigammas kunye nokwenza ingqokelela yeempawu zabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iimpawu- Iimpawu, i-injini yokukhangela
URocio Cano Llerena sitsho
Phendula Rocio Cano Llerena
I-Autodesk 3ds Max yenye yezona software zibalaseleyo zokuyilwa kwemizobo
I-Omexpo ngu-Futurizz kunye nokuvela koyilo